Tiny Core Linux 8.1 inowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Vanoda ve yemahara software uye yakaderera zvinodiwa iwe uri mune mhanza, sezvo iyo nyowani vhezheni yeTiny Core Linux inoshanda system ichangobuda, kunyanya vhezheni 8.1 iyo inouya nenhau huru.
Tiny Core inozivikanwa kuva imwe yeanonyanya kushambadzira uye akareruka mugove weLinux kunze uko, kugona kushanda pamakomputa chaizvo kubva muzana rekupedzisira. Iyi vhezheni yakagadzirisa mabhugi akaonekwa mushanduro dzakapfuura, pamusoro pekuwedzera zvimwe zvitsva.
Iyi vhezheni itsva, Yakagadziridzwa Busybox Command Console Toolkit, yakanyanya kushandiswa muLinux nyika. Mune iyi vhezheni mamwe mabhugi akagadziriswa, semuenzaniso ane hukama neiyo LZMA algorithm.
Uye zvakare, yakagadziridzwa rutsigiro neinternet, ichiwedzera maficha senge static ip mune mamwe maturusi. Zvimwe zvishandiso zvakaita seClibc ldconfig zvakagadziridzwa zvekare, zvichimhanya zvimwe zvipembenene zvakawanikwa mushanduro 8.0.
Mukupedzisa, vhezheni 8.1 ndiyo yakagadziridzwa vhezheni ye Tiny Core 8.0, saka munhu wese akarodha pasi vhezheni 8.0, anofanira kugadzirisa kune iyi nyowani vhezheni kana vachida kunakidzwa nenhau dzese.
Tiny Core iri yakanyanya minimalist inoshanda sisitimu, ndiko kuti, Linux isina kupfeka, isina kana pre-yakaiswa mafomu. Izvi zvinoreva kuti zvinotora nzvimbo diki padiki pane iri rakaomarara diski, kuti rakareruka uye kuti tinogona zvakare kugadzirisa zvese zvatiri kuda.
Izvi zvinoita inoshanda sisitimu isingakodzere ma newbies, sezvo ichinyatsoda kuti isu tizive mashandisiro ekushandisa rairo koni uye kuti isu tine ruzivo neLinux anoshanda masystem. Nekudaro, kana iwe uine ruzivo, iwe uchave uchinyatso kuda kuzvijairira iwe nekuda kwako.
Kuti utore pasi, enda kune yako peji yepamutemo, uko kwaunogona kurodha pasi ese ari makumi matatu nematatu uye 32-bit vhezheni uye ese akasiyana ayo, mamwe acho akazara kupfuura mamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Tiny Core Linux 8.1 inowanikwa
Ruben Valencia akadaro
Ini ndinogona kuisa dzazvino vhezheni dzeInkscape 0,92.3 pane Tiny Core Linux uye mamwe maapplication akaita seGimp?
Pindura Rubén Valencia